Warar dheeraad ah oo kasoo baxay weerarkii koonfurta Gaalkacyo – Radio Daljir
Warar dheeraad ah oo kasoo baxay weerarkii koonfurta Gaalkacyo
Nofeembar 26, 2018 8:07 b 0
Sheekh C/weli Cali Cilmi Yare oo muran badan ka dhex dheliyay baraha bulshada, xaaskiisa iyo hooyadiisa iyo 13 ka mid ah xertiisa ayaa lagu dilay weerar saakay lagu qaaday mowlac uu ka deganaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Wararka ayaa sheegaya gaari qaraxa markii hore lagu weeraray xarunta , waxaana markaasi ka dib gudaha u galay kooxdii hubaysnaa ee weerarka qaaday.
Ciidamada ammaanka ee Danab ayaa sheegay inay toogteen mid ka mid ah ragga weerarka soo qaaday oo dhaawac uu soo gaaray, waxaana sheegtay masuuliyadda weerarka Al-shabaab.
Sheekhan ayaa caan ku noqday muuqaalo miyuusak isaga iyo dhalinyaro wiilal iyo gabdho isugu jiray ay soo gelin jireen bog uga furnaa Youtubeka, iyadoona lagu eedeeyey inuu nabiga u gafay kadib markii sawir uu la meel dhigay.
Ninkan ayaa horay maxkamad ku taala magaalada Gaalkacyo ay ku riday xukun, balse markii dambe waxaa lagu siidaayay kadib markii uu beeniyay inuu nabinimo sheegtay.
Ruushka oo qabtay sadex ka mid ah maraakiibta dagaal ee Ukrain
Weeraro rasaas iyo qaraxyo oo saakay lagu qaaday xarun ku taala Gaalkacyo